सलमान खानकी 'वान्टेड गर्ल' लामो समय पछि देखिईन क्यामरामा, लिप सर्जरी पछि भईन यस्ती
सलमान खानकी ‘वान्टेड गर्ल’ लामो समय पछि देखिईन क्यामरामा, लिप सर्जरी पछि भईन यस्ती
असार ०२, २०७५ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ। भारतीय सिने जगत(बलिउड)की अभिनेत्री आयशा टकिया निकै लामो समय पछि एक विज्ञापनको शुटिंगको क्रममा क्यामरामा कैद भएकी छिन् । आयशाका तस्बिर भारतको मुम्बई स्थित गोरेगाउँको एक स्टुडियोमा विज्ञापनको शुटिंग गर्दाको क्रममा भारतीय फोटो एजेन्सी फोटोकर्पले कैद गरेको हो।
आयशा टकिया बलिउड डेब्यु फिल्म ‘टार्जन: द वन्डर कार’ बाट देश-विदेशमा निकै लोकप्रिय भएकी थिईन। यस फिल्मको लागि उनलाई फिल्मफेयर उत्कृष्ट महिला पदार्पण पुरस्कार र इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवार्ड्स(आईआईएफए) स्टार डेब्यु अफ द ईयर अवार्ड प्रदान गरिएको थियो।
त्यस पछि उनले थुप्रै फिल्महरुमा प्रमुख अभिनेत्रीको रुपमा काम गरिन्। आयशाले समाजवादी पार्टीको विधायक रहेका अबू आजमीको पुत्र फरहान आजमीसँग २०१४ मा विवाह गरिन्।
आयशा अन्तिम पटक सलमान खानसँग सन् २००९ मा रिलिज भएको फिल्म ‘वान्टेड’ मा देखिएकी थिईन। त्यस पछि बाट सिल्भर स्क्रिनबाट टाढा छिन्।
विवाह पछि आयशा लाइमलाइटबाट टाढा भएकी हुन् । घरको जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि केही दिन ब्रेक लिएको उनले बताएकी थिईन तर अब उनले फेरि फिल्मको स्क्रिप्ट सुन्न सुरु गरेकी छिन्।
अहिले उनी आफ्नो फिटनेसमा धेरै ध्यान दिईरहेकी छिन् र आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा आफ्नो फेसन स्टाइलको कारण पनि चर्चामा छिन्।
सन् २००० देखि अहिलेसम्म यस ८ वर्षको समयावधिमा आयशा टकियाको लुकमा निकै हदसम्म बदलाव आएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार आयशाले ओठ, जअ लाइन, आंखीभौं र निधारको सर्जरी गरेको बताईएको छ।
उनको नयाँ लुक सार्वजनिक भए पछि उनी सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल पनि भएकी थिईन।
आयशाका यी फोटोहरु देखे पछि धेरैले उनी बलिउडमा पुनरागमन गर्ने अनुमान गरेका छन्।
प्रकाशित : शनिबार, असार ०२, २०७५१३:३३
यस गायिकालाई सलमान खानसँगको पंगा महँगो साबित : ४८ घण्टामा आएको थियो १००० पटक बलात्कारको धम्की !
विवाह हुनसाथ दिपिका-रणवीरको हनिमुन प्लान लिक, अनुष्का र विराटलाई पछ्याउँदै!
बुद्ध लामाको ‘तिम्रो मायामा’ सार्वजनिक [भिडियो सहित]
सलमान खान बने गीतकार: सलमानले लेखेको गीत “सेल्फिस”मा उनकै प्रेमिकाको स्वर
गोल्डेन ग्लोब अवार्डका विजेतामाथि लाग्यो यौन उत्पीडनको आरोप
बहुबली ‘भल्लालदेव’ को नयाँ चलचित्र ‘हाथी मेरे साथी’ को फर्स्ट लुक सार्वजनिक!
हास्यकलाकार दिपकराज गिरीकी छोरी मौषमीको विवाह सम्पन्न, दिपाले दिईन् बधाई!
८ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका
१२ मिनेट अगाडि पत्रपत्रिका